I-China Vermiculite ifektri nomakhi | I-Lingshou
Umbala Flake 4125
Umbala Flake 8013
I-Vermiculite luhlobo lwamaminerali agqinsiwe aqukethe i-Mg futhi degenerates okwesibili kusuka kuma-hydrate aluminium siltures. Ngokuvamile kwakhiwa ngokushintsha kwezulu noma i-hydrothermal change of biotite noma phlogopite. Ihlukaniswe ngezigaba, i-vermiculite ingahlukaniswa nge-vermiculite engafakwanga futhi i-vermiculite enwetshiwe. Ihlukaniswe ngombala, ingahlukaniswa ngegolide nesiliva (uphondo lwendlovu). I-Vermiculite inezindawo ezinhle kakhulu njengokufakelwa kokushisa, ukumelana nokubanda, ama-anti-bacteria, ukuvimbela umlilo, ukumuncwa kwamanzi kanye nokufakwa komsindo, njll. Uma kubhakwa imizuzu eyi-0,5 ~ 1.0 ngaphansi kwe-800 ~ 1000 ℃, ivolumu yayo ingandiswa ngokushesha ngo-8 kuya ku-15. izikhathi, kuze kube izikhathi ezingama-30, ngombala oguqulwe waba yigolide noma isiliva, ukhiqiza i-vermiculite ekhulisiwe esetshenziswe ngombala engeyona i-acid futhi ingekho kahle ekusebenzeni kukagesi. I-Vermiculite ngemuva kwenqubo yokunwebeka izothatha ukwakheka okungabekezeleleki, kanti inani ngokuvamile liyi-100-200kg / m³ (Ngenxa yenani elikhulu le-vermiculite enwetshiwe, izindleko zokuhamba zingaba zikhulu impela, ngakho-ke i-vermiculite ethunyelwayo imvamisa iyizinhlobo ezingafakwanga) .
Ukucaciswa kwe-vermiculite ye-Crude: 0.15-0.5mm, 0.5-1mm, 1-3mm, 2-4mm, 3-6mm, 4-8mm, 8-16mm.
Izakhiwo Zenyama Nezomzimba zeVermiculite
Ngenxa yamazinga ahlukene we-hydration ne-oxidation, izingoma zamakhemikhali ze-vermiculite azifani. Indlela yamakhemikhali ye-vermiculite yile: Mg x (H2O) (Mg3-x) (ALSiO3O10) (OH2)
Kwezolimo, i-vermiculite ingasetjenziswa njengendawo yokulungisa inhlabathi, ngenxa yokushintshanisa nokufakwa kwe-cation, ithuthukise ukwakheka kwenhlabathi, ukugcinwa kwamanzi nomswakama wenhlabathi, ithuthukise ukutholakala kwenhlabathi nokuqukethwe kwamanzi, yenze inhlabathi ye-acidic iguquke ibe ngumhlaba ongathathi hlangothi; i-vermiculite nayo ingadlala indima e-buffer, ithikameza izinguquko ezisheshayo zenani le-PH, yenze ukukhululwa komanyolo kuhamba kancane ekukhuleni kwezitshalo okuphakathi, futhi ivumele ukusetshenziswa okuthe xaxa kukamanyolo wesitshalo kodwa kuyingozi. I-Vermiculite nayo inganikezwa esithelweni ngokwayo iqukethe i-K, Mg, Ca, Fe, futhi ukulandelela amanani we-Cu, Zu. Njengokungenisa, ukushintshanisa kwe-cation kanye nokwakheka kwamakhemikhali we-vermiculite, ngakho-ke kudlala ukulungiswa komanyolo, ukugcinwa kwamanzi, ukugcinwa kwamanzi, ukuvunyelwa kanye nomanyolo wamaminerali, nezinye izindima eziningi. Ukuhlolwa kukhonjisiwe: beka i-vermiculite enwetshiwe eyi-0,5-1% exutshaniswe nomanyolo, vumela isivuno sesilimo ngo-15-20%.
Ekutshaleni ingadi, i-vermiculite ingasetjenziselwa izimbali, imifino, ukulima izithelo, ukuzalanisa nezinye izici, ukwengeza ukubumba inhlabathi nabalawuli, kepha nesiko elingenamhlabathi. Ngokuqondene nezimpande zotshani ezondlayo zokutshala izihlahla ezibunjiwe kanye nezithombo zezentengiselwano, kusiza ukuthutha nokuhambisa izitshalo. IVermiculite ingakhuthaza ngempumelelo ukukhula kwezimpande zezitshalo nokukhula kwembewu, inganikeza amanzi kanye nokudla kwezitshalo ezikhula isikhathi eside, futhi kugcina ukushisa kwezimpande kuzinzile. I-Vermiculite ingenza ukuthi isitshalo sithole amanzi anele kanye namaminerali esiteji sokuqala, sikhuthaze izitshalo ukuthi zikhule ngokushesha, futhi zikhuphule umkhiqizo.
I-vermiculite enwetshiwe, eboshwe ophahleni, izodlala umphumela omuhle kakhulu wokufaka ukushisa, okwenza isakhiwo sifudumele ebusika futhi sipholile ehlobo. Kusetshenziswa izitini ze-vermiculite odongeni lokwahlukanisa okuphezulu okuphezulu noma ukusebenzisa amabhlokhi we-vermiculite njengezixhobo zokuhlukanisa emahhotela noma ezikhungweni zokuzijabulisa, imiphumela yokufaka umsindo, ubufakazi bomlilo, ukulondolozwa kokushisa nokunye kuzokhonjiswa ngokuphelele futhi isakhiwo sizoncishiswa nomthwalo waso .
Amafomu amancane womoya womoya ngemuva kokunwetshwa kwe-vermiculite, enika amandla i-vermiculite enwetshiwe yaba yinto yokufaka yomsindo we-porous. Lapho imvamisa ingu-2000C / S, isilinganiso esidonsa umsindo we-5mm thick vermiculite singama-63%, 6mm 84% no-8mm 90%.
I-Vermiculite yinhle kakhulu ekumelaneni nesithwathwa njengamandla ayo namandla ayo igcina ngokufana ngisho nangemva kokuba idlule izikhathi ezingama-40 zokuhlola umjikelezo wamahhala we-thaw ngaphansi kuka-20 ℃. Iyindlumbana futhi inempahla yokufaka. Ingagcina ukushisa futhi ivikele ukubuyiswa. Ngaphandle kwalokho, ingadonsa imisebe ye-radiation, ngakho-ke amabhodi e-vermiculite angabekwa ngaphakathi kwelabhorethri ukufaka indawo yamabhodi okuhola ashibhile ukumunca aze afike kuma-90% wemisebe ehlakazekile. I-vermmiculite engu-65mm eyindilinga ilingana nebhodi le-lead engu-1mm.
I-vermiculite powder enwetshiwe yenziwa nge-vermiculite ore, yabalwa ngamazinga okushisa aphezulu, i-screening, ukugaya. Ukucaciswa okuyinhloko yilezi: 3-8mm, 1-3mm, 10-20mesh, 20-40mesh, 40-60mesh, 60mesh, 200mesh, 325mesh, 1250mesh. Ukufaka isicelo: kumishini yokufaka ukufakelwa ezindlini, imishini yokuqhafaza yasendlini, ifulethi yokufaka umsindo, ipayipi eligcinwe ephephile nelesela, ukugcinwa kwe-boiler ukugcina izingubo ezishisayo, izintambo zensimbi, usimende wokufaka umlilo wesitimela, imishini yokufakelwa kwezimoto, imishini yokufakelwa kwezindiza, imishini yokufaka yokubanda ebandayo, ibhasi imishini yokufakelwa, imibhoshongo yokupholisa amanzi asodongeni, ukumiswa kwensimbi, izicishamlilo, izihlungi, isitoreji esibandayo, i-linoleum, amaphaneli ophahla, ama-cornices, amabhodi wamasango wedayili, ukuphrinta kwamaphepha odonga, ukukhangisa kwangaphandle, upende, ukukhulisa ukubonakala kwepende, isithombe somlilo esithambile sokhuni. iphepha lomlilo lezinkuni, uyinki wegolide nowethusi, upende izithasiselo zangaphandle.
Olandelayo: Umbala Flake
I-Composite Color Flake 560
Umbala Flake 4019
I-Mica Powder 2